YINTONI IBRICKMOLD EMNYANGO? (ISIKHOKELO SOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Yintoni iBrickmold emnyango? (Isikhokelo soYilo)
Apha siphendula umbuzo wento yokwenziwa kwezitena emnyango kubandakanya iindidi ezahlukeneyo zecasings kunye nebrickmold vs akukho mnyango wezitena. Ukuthatha isigqibo sokuba ukusebenzisa izitena emnyango okanye akunakuba ngumceli mngeni, akunjalo? Nokuba ibonelela ngeempawu zobuhle okanye iphakamisa iinkxalabo ngokubhekisele kukhuseleko nokhuseleko - uninzi lwabanini makhaya bahlala bejikelezwe sisiphithiphithi ukuba esi iya kuba sisigqibo esifanelekileyo sokwenza.
Ngapha koko, kubalulekile ukuba ukhethe izinto ezizinzileyo ngelixa ukhetha ezona ndlela zokufaka zibumbekayo ezihlala ixesha elide. Ke, yintoni kanye kanye isitena setena?
iingoma zomtshato eziphezulu zokudanisa
Ngaba ukhe wabona isakhelo esityebileyo esijikeleze ukuvuleka kodonga? Ewe, eso sakhiwo sibizwa ngokuba ngumngundo kwaye sineempawu ezifanayo njenge-trim kunye ne-architraves.
1. Umthi othambileyo
2. Umthi okhuni
IBrickmold Vs Akukho Brickmold Door
Ngaba ndifuna uMnyango ngeBrickmold?
Isitayile somzi wobugcisa ekhaya Umnyango wangaphambili onezibane ezingasemva kunye nezitena zezitena.
Ewe, iBrickmold yindawo yokugcina iingcango, iifestile, kunye naluphi na uhlobo lokuvula udonga olusebenza njengomqobo phakathi kwesakhelo kunye nesakhelo. Izinto ezijongwa ngaphandle ezijonge ngaphandle zongeza ubuhle obucokisekileyo kwiminyango nakwiifestile ngelixa zinika izibonelelo zokhuselo nokhuseleko olongezelelweyo.
Ifumaneka kuluhlu olubanzi lobungakanani, izitayile, kunye nezinto - abaninimzi ngoku basikelelwe ngeendlela ezinkulu zoyilo kumakhaya abo.
Ukusebenzisa le ngxube yesikhunta kunokukhusela iingcango zakho kwaye kubancede bandise ubomi babo ngelixa basebenza njengobunzima bokugcina imozulu. Izitena okanye akukho zitena - ukhetho lolwakho; Nangona kunjalo, nantsi ingcaciso ethe kratya malunga nale nto yoyilo ukukunceda uthathe izigqibo ezinolwazi ngekhaya lakho.
Isitena seBrickmold siyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo (kuxhomekeke kububanzi), izitayile (zale mihla, zincinci, ezesiko), kunye nezinto (iinkuni, i-PVC). Ubungakanani besitena buya kwahluka ngokujikeleza ii-intshi ezimbini ubukhulu.
Nangona kunjalo, unokukhetha isitena sokubumba njengezitayile zoyilo kunye nenkcazo. Ingabandakanya kwindawo ethile phakathi kwe-1.25 intshi ukuya kwi-1.5 intshi.
Kwelinye icala, kuxhomekeke kwimathiriyeli yomnyango wakho kunye neefestile zefestile, unokukhetha eyona ndlela ibambekayo yokubopha kunye nezinto eziphathekayo. Makhe sixoxe ngokweenkcukacha malunga nezinto ezahlukeneyo onokuzijonga.
Enye yeentlobo eziqhelekileyo, i-softwood iza ikakhulu kwiindidi ezimbini-ezimhlophe okanye ezimthubi. Le typology ayisiyonto ikhuthazwayo kwimimandla evezwe yimozulu embi, nangona kunjalo, ukupeyinta kunye nokucoca iyintshi nganye yesakhelo kunokongeza kubomi bekasi.
Olunye lolona khetho luhlala luhleli, umthi onzima ucinga ngobubi bomthi othambileyo ukubonelela ngokuzinza okungagungqiyo kunye nokumelana nemozulu embi. Olu khetho luyabiza kakhulu ngokubhekiselele kubasebenzi kunye nezinto ezifunekayo.
Ezi zinto zikwi-casing zinceda ukumelana nezinambuzane, ukufuma, kunye nokubumba. Iyakwazi ukumelana nemo yezulu engqingqwa yokubonelela ngokuzinza okukhulu kunye nokuphila ixesha elide. Ngapha koko, i-PVC ayifuni nolondolozo oluphezulu- yiyo ke loo nto, ukongeza kwenye inzuzo.
Kwelinye icala, kuba i-PVC ibonelela ngezi zinto zilungileyo, kubalulekile ukuba wazi ukuba zibiza kakhulu xa kuthelekiswa noogxa bazo beplanga.
Kuba ukungena kunye neminyango sisitshixo sokhuseleko ekhayeni-akufuneki ulalanise ngokuzinza nokhuseleko. Yiyo loo nto kuhlala kucetyiswa ukuba ukhethe umnyango kunye nezitena njengoko ikwabonisa ukubonakala okuhle kwiindwendwe zakho nakwiindwendwe.
Nangona kunjalo, nokuba ngaphandle kwezitena emnyango kunokuba nakho ukulunga kunye nokubi-yiyo loo nto, makhe sixoxe ngezi meko zimbini ekufuneka zinikezelwe.
Okokuqala nokuphambili, umnyango onezitena uya kubonelela ngokuzinza okungapheliyo. Ithintela ukutyabeka udaka ngasemnyango ukuqhubela phambili ukomeleza amandla.
Okwesibini, umnyango onezitena uyakukhusela kwimozulu- nokuba yimvula, ukoma, okanye ikhephu, uya kuthintela ukugcinwa kokufuma kwaye ekugqibeleni ukubola kwempahla. Ewe, akukho nto inokubetha i-aesthetics kuba yeyona nto iphambili kuyo ukwenza ukuba indawo ibonakale intle kwaye intle.
Ke, ukongeza isitena eminyango yakho kungongeza ukubonakala okucocekileyo kunye nokucekeceke. Iya kwenza ukuba iingcango zakho zibonakale zinobubanzi kwaye zibanzi (kunye nesisombululo esikhulu kwimeko yeminyango emxinwa).
Kwelinye icala, umnyango ongenasitena sinezinto zawo onokuzijonga. Okokuqala nokuphambili kukufikeleleka - ukuba ufuna indawo yokuhlala okwethutyana, ukufaka umnyango onobuchule ngaphandle kwezitena kuya kuba sisenzo esifanelekileyo.
Kwakhona, yinkqubo elula nekhawulezayo, kuba akukho fakelo lwezitena olufuna ixesha elininzi. Ngapha koko, ukuba ukhetha ukubukeka okuthe tye kwaye okuncinci emakhayeni akho, esi sitena masibe ngu-hayi kuba sibonisa ukubukeka kwendabuko kunye nemveli kwiminyango yakho.
ilokhwe yomtshato yomsitho waselwandle
Nangona umnyango onezitena ubonelela ngezibonelelo ezininzi, ukhetho lwakho lolwakho ngokupheleleyo. Ke, ukuba unohlahlo-lwabiwo mali kunye nexesha lokuzibandakanya kwinkqubo yofakelo-unokukhetha kunye nezitena kwiindawo zakho.
Esinye isizathu sokusebenzisa izitena zezitena kukuba ucwangcisa ukuhlala kuloo ndawo ekuhambeni kwexesha okanye ukuba ungumnikazi wendlu. Oku akuyi kongeza kuphela ixabiso elihle kumakhaya akho kodwa kuya kubonelela ngokhuseleko kunye nokhuseleko lwexesha elide.
Kwelinye icala, izitena zikhusela indawo yakho nakweyiphi na into enxibayo. Ke, ukuba uhlala kwingingqi okanye ilizwe elijongene nemozulu enzima unyaka wonke, ungafuna ukuqaphela ukufaka izitena zezitena macala onke kwiminyango nakwiifestile.
Ngelixa, ukuba ukhetha umnyango ngaphandle kwesitena, iindleko ezenziweyo ziya kuba sezantsi ngokuhamba kwexesha kodwa kamva emva kweenyanga ezimbalwa, unokufuna ukutshintshwa rhoqo kweminyango. Yiyo loo nto kusoloko kububulumko ukukhetha umnyango ngezitena ukunqanda naziphi na izinto ezingenamsebenzi endaweni yazo.
Ukuba uthenga umnyango omtsha, kubalulekile ukuba uqwalasele indlela izinto ezisabela ngayo kwimozulu yendawo. Kwaye ukuba indawo ichanekile kwilanga elitshisayo okanye iimvula eziqhelekileyo kunye nekhephu- unokufuna ukubeka phambili umnyango owomeleleyo ngesitena esomeleleyo.
Ngoku sithethile ngobubanzi bomnyango ngaphandle nangaphandle kwezitena - uqinisekile ngokuthatha isigqibo? Ewe, masazise iingcinga zakho kunye novavanyo kwizimvo ezingezantsi.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela iphepha lethu kwi- Iindidi zamaqhina eminyango .
mfutshane utata intombi iingoma zomdaniso
iinzuzo zerhafu zokutshata
zingaphi iinyanga zomvuzo womtshato wokuzibandakanya
Uyilo lwangaphakathi lwegcisa langoku